मन्त्री यादवको प्रश्नः मैले क्षमता नै नबुझि विषादी जाँचबारे निर्णय लिँदा अरुले पनि हावा उफ्रनु पर्छ? - हिमाल दैनिक
मन्त्री यादवको प्रश्नः मैले क्षमता नै नबुझि विषादी जाँचबारे निर्णय लिँदा अरुले पनि हावा उफ्रनु पर्छ?
२३ असार २०७६, सोमबार १२:२६
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफूले सरकारको क्षमता नै नबुझि विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी चेकजाँचबारे गरको निर्णयबारे अहिले सत्ता र प्रतिपक्षबाटै हावाको तालमा उफ्रिएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे सांसदहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री यादवले विषादी परिक्षणको विषयलाई प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि कुर्सी नपाएको झोकमा ‘तीलको तार’ बनाउने काम भएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सरिता प्रसाइले नेपालको चिया, अलैँची लगायतका उत्पादन भारत निर्यात गर्दा उसले सीमामा चेक जाँच गर्ने र अर्गानिक चिया पनि कलकत्तामा चेक जाँच गर्ने तर, नेपालले आफ्ना जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तरकारी फलफूलको विषादी चेक किन गर्न नहुने भनि प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी सत्तापक्षकै सांसद सुमनराज प्याकुरेलले विदेशबाट आयातित् तरकारी परिक्षण प्रयोगशालाबारे मन्त्रीहरुबीच फरक फरक धारण आउन भएन भनि सुझाव दिए।
त्यसपछि थप स्पष्टिकरण दिने क्रममा मन्त्री यादवले अहिले एउटा विषयले बजार गरम भएको भन्दै यसमा सांसदहरु पनि तातेको बताए।
यसरी सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोधका आवाजहरु कुन नियतबाट आएको छ भन्दै उनले लामो समय सत्तामा बसेर केही नगर्नेले निकै फूर्तिफार्ती गरेको आरोप पनि लगाए।
आफूले पहिले विषादी परिक्षणको निर्णय गरेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हामीले निर्णय गरेपनि क्षमता नै नभएको कारण गर्न सकिएन। यो मेरो कमजोरी हो। यसलाई म स्वीकार गर्छु।’
सरकारका मन्त्रीहरुले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने उदाहरणको रुपमा आफैँ प्रस्तुत हुँदै मन्त्री यादवले भने,
‘कृषि मन्त्रालयमा त्यो क्षमता नभएको कुरा मलाई थाहा भएन। त्यहि अनुसार अगाडि बढायौँ, राम्रो काम गर्न खोज्नुलाई नै कसैले अपराधको रुपमा बुझ्छ भने अर्कै कुरा हो। यसबार थाहा नपाई निर्णय गर्नु मेरो कमजोरी हो।’
आज पनि ठाउँ ठाउँमा विरोध र नारा जुलुसले सडक जाम रहेको बताउँदै उनले कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै त्यत्रो लामो समय सत्तामा बस्दा केहि गर्न नसक्ने अनि सरकारले अहिले गर्न खोज्दा केहि पुगेन र स्थगित हुँदा विरोध गर्ने भनि प्रश्न गरे।
आफ्नो मन्त्रालयले विदेशबाट आयात गर्ने फलफूल र तरकारीको विषादी परिक्षणको निर्णय गरेपछि कृषि मन्त्रालयका सचिवले काठमाडौंको केन्द्रीय तहमा मात्रै खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर मापन गर्न सक्ने प्रयोगशाला रहेको र अरु ठाउँमा नरहेको जानकारी आफूले पाएको बताए।
उनले थप्दै भने, ‘कृषि मन्त्रालयका सचिवले पठाएको कुरा कृषि मन्त्रीले पनि पढ्नु भएन कि म जस्तै। कतिपय चिज त सचिवले ल्याउँछ हामी विश्वास गरेर सहि गरिदिन्छौँ। त्यस्तै उहाँले पनि पढ्नु भएन भने उहाँको पनि कमजोरी हो। मैले हेर्नु पर्दथ्यो कि त्यो क्षमता छ कि छैन। तर यसमा मेरो कमजोरी भएको हो।’
प्रयोगशाला स्थापना गर्ने समयसम्मका लागि परिक्षण कार्य रोकिएको जानकारी दिँदै उनले क्वारेन्टाइन जाँच भने भइरहने बताए।
सरकारको आलोचनामा सत्तापक्षकै नेताहरु समेत लागेपछि आक्रोसित बनेका मन्त्री यादवले भने,
‘प्रतिपक्ष कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ रे तर, यहाँ त पक्ष नै कस्तो न कस्तो देखियो। सत्तापक्षकै साथीहरु पनि कस्ता कस्ता प्रश्न उठाउन थाले के? यो कन्सट्रक्टिभ हो कि डिस्ट्रक्टीभ हो? जिज्ञासा राख्नु एउटा कुरा हो, उफ्रिनु अर्कैकुरा हो।’
मानिसमा दुइवटा प्रवृत्ति भएको बताउँदै आफूले पाए जे पनि गरिदिने र यदि कुनै कारणबस कुर्सीमा जान पाएन भने पूरै अराजक बनिदिने? भन्दै उनले यसले देश निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा गरे।
यथार्थमा टेकेर बसह गर्न आग्रह गर्दै यादवले भने यहाँ त कुर्सीमा पुग्न नपाएपछि सत्तापक्षकै पनि डिस्ट्रक्टीभ भए। यसले देश निर्माण गर्दैन। हावाको तालमा बोल्नु भएन। कृषि मन्त्रालयमा गएर हेरे हुन्छ।’
विदेशीको अगाडि जसको झुक्ने बानी थियो उही झुक्ने बताउँदै उनले आफूहरु देश र जनताको हितमा काम गर्ने बताए।
त्यतिमात्रै होइन, उनले अहिले नेपालीहरु आफैँले नाकाबन्दी गर्ने तर्फ जान लागेका बताउँदै कुनै पनि प्रश्न उठाउनु अघि गम्भिरता पूर्वक सोच्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले देशमा कति क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
Prevपछिल्लोविजयपुर खोलामाथि डाइभर्सन बाढीले बगायो
अघिल्लोचार दिन सम्म देशभर मनसुन सक्रियNext